Fitaterana an-dranomasina : handray ny IOLP 2017 ny Spat | NewsMada
Fitaterana an-dranomasina : handray ny IOLP 2017 ny Spat
Misokatra rahampitso 22 marsa sy 23 marsa ao amin’ny Carlton ny fampiantranoan’ny orinasa mpitantana ny seranan-tsambon’i Toamasina (Société du port à gestion autonome de Toamasina – Spat ) ny fampahalalana momba ny tontolon’ny fitaterana an-dranomasina sy ny enti-miasa rehetra ao aminy aty amin’ny ranomasimbe Indianina (Salon des ports et de la logistique de l’océan Indien – IOLP). Mikarakara izany fotoan-dehibe izany ny Transport event management.
Ifaneraseran’ireo matihanina iraisam-pirenena eo amin’ny sehatry ny fitaterana an-dranomasina io fotoana io. Ho hita amin’izany ny tranoheva maherin’ny 30, manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, handraisan’ny Malagasy sy vahiny anjara miisa 300 mahery. Hisy koa ny famelabelaran-kevitra ataon’ireo manampahaizana manokana miisa 35, hadika mivantana amin’ny teny frantsay sy anglisy.
Raha eto Madagasikara, santionany aty amin’ny ranomasimbe Indianina ny seranan-tsambon’i Toamasina amin’ny halehibeny, notokanana ny taona 1935. Miainga avy ao ny raharaham-barotra maro eto an-toerana ary ankehitriny, ao amin’ny Spat avokoa ny 35 % ny asa mivantana ao Toamasina, ankoatra ireo asa mifandray aminy.